Runyerekupe runotaura nezveApple Watch neTouch ID | Ndinobva mac
Runyerekupe runotaura nezveApple Watch ine Kubata ID
Zvinotaridza kuti nhau nezveApple Watch ishoma maererano nenhau dzinogona kuunza muzvizvarwa zvinotevera zveiyi smartwatch uye ikozvino yakakosha inoonekwa. Sezviri pachena iyo Apple Watch yaizowedzera sensor yeminwe.
Pamusoro peichi chinhu chitsva icho Apple inotarisa yenguva yemberi inogona kuunza, zvinonzi kuongorora kwehope uye chishandiso chekuziva iko kuzadza kweoksijeni kweropa nguva dzese chingave chinhu chaicho cheApple Watch yegore rino. Iyo yekudzikira kune runyerekupe rwatinaro patafura ndeyekuti Series 2 mamodheru anogona kupera kweiyo watchOS 7 vhezheni.
Takatotaura nezvesarudzo iyi, iyo inotibvumidza kuyera ropa oxygen saturation uye kuongorora kurara, mukati ndiri kubva kuMac.Zve mukana wekuti Apple Watch inowedzera chigunwe cheminwe, kusvika kwayo hakutarisirwe kusvika muna 2021, zvichidaro , asi zvirinani kuti zviri kutaurwa kuti izvi zvinogona kuve a mutsva wachi basa. Kudzivisa kuve nekupinda yekuvhura kodhi yeiyo wachi hachisi chinhu chinotinyatsoda isu zvakanyanya kuita, asi Kubata ID kunogona kurerutsa zvizhinji ichi chiito uye zvimwe izvo zvinoda kupinda mukodhi.
Pakudikanwa chaiko kwekuva nesarudzo iyi pakurinda, nekuti hatisi kuzopinda sezvo iri nguva pfupi, asi tinogona tenga maapp Muchitoro cheapps chewachi pachayo, kuisa munwe wako pachiratidziri kana nzvimbo yaunofunga kuisa sensor (inova imwe nyaya yakakosha) inoita kunge zano rakanaka. Zvinogona kunge mune inotevera WWDC pachave nesarudzo inonakidza yeWOSOS iyo muzvizvarwa zvinotevera sarudzo yekuwedzera iyo yeminwe inonzwa. Unofunga Apple ichawedzera sensor yeminwe kuApple Watch Series 7?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Runyerekupe runotaura nezveApple Watch ine Kubata ID
Apple TV 64GB, macOS Catalina yekupedzisira vhezheni, iFixit MacBook Air uye nezvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac
Apple inowedzera kuyedzwa kwemahara kweayo "Pro" kunyorera kumazuva makumi mapfumbamwe nekuda kwekukiya